चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय विमान १३ यात्रुसहित बेपत्ता ! « The News Nepal
चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय विमान १३ यात्रुसहित बेपत्ता !
काठमाडौं । भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा गएको एक भारतीय वायुसेनाको विमान हराइरहेको छ । हिजो मध्यान देखि हराएको विमानको खोजिकार्य तिव्र बनाइएको छ । यसका लागि थप सेनाको पनि सहयोग लिइरहेको छ । वायुसेनाको एएन–३२ विमान चीनको सीमा नजिकैबाट हिजो हराएको हो ।
विमानको खोजी कार्य रातभर भैरहेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन् । विमान खोजी अभियानमा विशेष अपरेशनमा प्रयोग हुने एयरक्राफ्ट सी–१३०, एएन–३२ एस, एमआई–१७ चोपर र थलसेनाका विभिन्न आधुनिक हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ । चालकदलका आठ सदस्यसहित १३ जना यात्री चढेको एयर फोर्स विमान एएन ३२ सोमबार दिउँसोको १ बजेदेखि सम्पर्कमा आउन सकेको छैन ।
जानकारहरुका अनुसार भारतीय वायु सेनाको विमान चीनको कब्जामा भएको हुनुपर्छ । यो पनि पढ्नुहोस्, झण्डै एक दशक भन्दा लामो समय सुरक्षाको कारण देखाउँदै पाकिस्तानमा उडान बन्द गरेको ब्रिटिस एयरवेजले सोमबारदेखि पाकिस्तान उडान सुरु गरेको छ । बेलायती वायुसेवाको उक्त उडान पाकिस्तानका लागि निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ ।
इस्लामाबादको म्यारिअट होटलमा घातक आक्रमण भएपछि ब्रिटिस एयरवेजले सन् २००८ देखि उडान स्थगित गरेको थियो । अब ब्रिटिस एयरवेजले लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलबाट पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद सिधा उडान हप्ताको तीन दिन गर्नेछ । बेलायतमा पाकिस्तानी मुलका दश लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन् ।
अहिलेसम्म पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) ले मात्र दुबै मुलुकबीच सिधा उडान गर्दै आएको थियो । पाकिस्तानले पछिल्ला १५ वर्ष मुलुकभित्रै सक्रिय लडाकू समूहसँग सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो जसका कारण हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खान सरकारमा आएपछि पछिल्ला केही वर्षदेखि पाकिस्तानमा आमुल परिवर्तन देख्नमा आउको छ ।